BBC oo booqatay xarunta dhaqan celinta mintidiinta ee Sucuudiga - BBC News Somali
"Ma ogi in uu daacad ahaa," ayuu yiri mid ka mid ah isagoo xabadkiisa taabanaya. "Qalbigiisa ayaan daalacan lahaa si aan u hubiyo inuu runta sheegayo!"
"Waxaa jiray erayo badan," waxaa sidaa yiri midkooda ugu da`da weyn, oo garkiisa caddaaday uu lalmado ilaa xabadkiisa, "balse waxaan ku xukmin doonnaa ficilladiisa."
"Ku soo dhowow barta saxaraha ku taala ee barwaaqada ah ee xikmadda," ayuu yiri Dr Hamid Al-Shayri, oo cilmiga bulshada ka bartay jaamacadda boqor Sacuud. "Tan waa meesha aan uga weecinno waddadoodii khaldaneyd, si aysan khatar ugu sii ahaan bulshada."
Wuxuu sheegay in shaqaalihiisu ay dhowr saacadood maalintii la fadhiistaan maxaabiista, balse wuxuu intaa raaciyay: "Ma aha howl fudud in dadka laga joojiyo naceybka bulshada iyo qoysaskooda."
Image caption Dr Bader Al-Razin oo ah khabiir dhanka farshaxanka ayaa sharaxaya muhiimadda farshaxanku u leeyahay raggan jihaadiga ah.
"Waan is beddelnay," ayuu yiri kooda ugu da'da weyn. "Waxaan isku aragnaa shakhsiyaad cusub hadda, xaruntan ayaa ku mahadsan.
"Xaqiiq, waan neceb nahay dadkii nagu gaboodfalay inta aan ku jirnay Guantanamo Bay, balse barnaamijyada xaruntan dartood waxaan awoodnay inaan ka soo kabanno dareenkaasi. Walaaceygu wuuxu hadda yahay in bulshadu ay na aqbali weydo.
"Tan kalena, dunidu aad bey isku beddeshay intaan maqneyn, waxaa laga yaabaa inaan aqoonsan weyno."